PHUKET ခရီးစဉ် (၂)
နောက် သဘောင်္စီးပြီး James Bond Island ကို ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ တော်တော်ကြာကြာ သဘောင်္စီး ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သဘောင်္ ပေါ်မှာ မပျင်းရပါဘူး။ ယိုးဒယားသား Tour Guide လေးရဲ့ အပြောကောင်းမှု၊ သဘောင်္မှာ ဧည့်ခံတဲ့ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် အအေးနဲ့ ရေ က Free Flow, ပြီးတော့ ငှက်ပျောသီးနဲ့ လိမ္မော်သီး စားပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေစကားပြောလိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ ရောက် လို့ရောက်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဘဲ နောက် ၃ နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ ဟိုတုန်းက Hollywood မင်းသားကြီး James Bond က သူရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ဒီကျွန်းမှာ ရိုက်ခဲ့လို့ James Bond ကျွန်းလို့ နာမည်တွင်တဲ့ ကျွန်းလေးကိုရောက်ပါပြီ။ ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုတည်းထီးထီးကြီး တည်နေတဲ့ ကျောက်တုန်းကို James Bond Rock လို့ခေါ်ပါတယ်။ မှတ်မိကြမလားမသိဘူး။ ကိုယ်က တော့အဲဒီနားရောက်တော့ ဘာကိုသတိရလည်းဆိုတော့ ဒွေးနဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ကြော်ငြာတဲ့ မီကို ကွေကာဘဲသတိရတယ်း)။ ပြီးတော့ အဲနားက ကျွန်းပေါ် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ဖို့ ၄၅ မိနစ် အချိန်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်လည်း ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့် နဲ့ ၄၅ မိနစ်က ဘယ်လိုကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ သူတို့သဘောင်္က လူတွေခေါ်မှဘဲ ကိုယ်တို့သဘောင်္ပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက် ကယ်အကျီ င်္တော့ဝတ်ထားပါတယ်။ သဘောင်္မှာလူဆင်းတဲ့ လှေကားကို ကိုင်ထားရင်း ဟိုနားဒီနား ကူးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ပါးစပ်ထဲ ပင်လယ်ရေ၀င်လို့ကတော့ မွန်းနေတာပါဘဲ။ရေထဲမှာ တော်တော်လေးကြာနေပြီးတော့ သဘောင်္ပေါ်ပြန်တက် နောက်တစ်နေရာကို ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေရာရောက်တော့ ကနူးလှေ စီးရပါတယ်။ တစ်စီးကို နှစ်ယောက် ပါ။ ဟန်နီးမွန်းဂူ လို့ခေါ်တဲ့ သူတို့ပြောတဲ့အခန်းလေး တွေပါတဲ့ ဂူထဲကို စီးရပါတယ်။ ဂူထဲကို လှေလေးနဲ့ လှည့်ပတ်စီးကြပါတယ်။ လှေ လှော်ပေးတဲ့ ကောင်လေးကသဘောအရမ်းကောင်းပါတယ်။
အချိန်ကြည့်ကြည့် တော့ နေ့လည် ၁း၃၀ ကျော်ကျော်ရှိနေပြီ်။ သဘောင်္စီးရင်းနဲ့ နေ့လည်စာကို သူတို့ကျွေးတဲ့ ဘူဖေး စားပါတယ် ။ ငါးဟင်းရယ်၊ ကြက်သားကြော်တွေရယ်၊ နောက် ပုစွန်၊ ပင်လယ်စာ တွေရယ် အရွက်ကြော်တွေရယ် အများကြီးပါဘဲ။တန်းစီတော့ Lady first လို့ယိုးဒယားသား ဂိုက်လေးရဲ့ အော်သံကြောင့် ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း လေးပြေးပြီးတော့ ဟင်းတွေယူကြပါတယ်။ သဘောင်္ပေါ်က ကိုးတောင်ဝတ် ယောကျာ်းတွေကတော့ မျက်စောင်းတွေတခဲခဲနဲ့။ မိန်းကလေးတွေ ပြီးတော့မှ ယောကျာ်လေးတွေက ယူရပါတယ်။ ဟင်းတွေကလည်း စားလို့အ၇မ်းကောင်းတာဘဲ၊ ဗိုက်ဆာနေလို့ လားတော့မသိပါဘူး။ တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းခဲ့ပါတယ။် စားပြီးသောက်ပြီး ၁ နာရီလောက်ကြာတော့ သဘောင်္ကြီးက ကျွန်းတစ်ကျွန်းနဲ့ မနီးမဝေးမှာ ရပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ရေဆော့ဖို့တဲ့ ။ ပင်လယ်ထဲမှာ ရေကလည်းအနက်ကြီးဘဲ။ နောက် နိုင်ငံခြားသားအဖြူကောင် တစ်ယောက်က ယိုးဒယားသားဂိုက်လေးကို သဘောင်္ပေါ်ကနေ ဒိုင်ဗင်ထိုးလို့ ရလားလို့မေးတော့ မရဘူးဆိုပြီး အဲဒီဂိုက်လေးက သူအရင်ခုန်ချပြပါတယ်။ နောက်အဲဒီနိုင်ငံခြားသားကြီးခုန်ချပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုယ့်တို့အဖွဲ့ထဲ ကကိုယ့်သူငယ်ချင်းယောကျာ်းလေးတွေခုန်ချပါတယ်။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က မျက်မှန်တပ်ထားလို့ ခုန်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်တို့ ကတော့ ဒိုင်ဗင်မဟုတ်ဘဲ သဘောင်္ထဲကနေ ရိုးရိုးရေထဲကို ဆင်းပါတယ်။ ခြေထောက်မမီပါဘူး.။ ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးတာ ပထမဆုံးဘဲ။
ပြီးတော့ Bird Cave လို့ခေါ်တဲ့ ငှက်တွေပေါတဲ့ ဂူကို သွားဖို့ သဘောင်္စီးရပြန်တယ်။ Bird Cave သွားတော့ တစ်လှေက်ို ဓါတ်မီးတစ်လက် ပေးပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒီဂူကဘာမှ မမြင်ရအောင်မှောင်မည်း နေလို့ပါ။ ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်ရင် ဂူနံရံတွေမှာ နေရာလွတ်မရှိအောင်ပြည့်နှက်နေတဲ့ လင်းနို့တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ လင်းနို့ချေးစော်တွေ ကလည်း နံလိုက်တာ ။အသက်အောင့်ထားရပါတယ။်
အဲဒီဂူကနေပြန် လာပြီးတော့ နောက်တစ်နေရာက်ို သွားခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ဂူက ကျတော့ သူက ရေနဲ့ ကျောက် ဆောင်နဲ့ ထိတော့မယ်။ လူတွေတောင်လှေပေါ်မှာ ထိုင်လို့မရဘူး ပက်လက်ကလေး အိပ်မှ ၀င်လို့ရတယ်၊ အဲလိုမှ မနေရင် ကျောက်ဆောင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ ထိမိတော့မယ်။ နောက် သဘောင်္ပေါ်ပြန်တက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ အပြန်ခရီးမှာ မပျင်းရအောင်ဆိုပြီး အခြောက်အက ကပြခဲ့ တယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဟော်တယ်ကို ညနေ6နာရီလောက်ပြန်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ နောက် နားပြုပြီး ည ၉ နာရီ မှာ lady boy show ကြည့်ဖို့ကား လာခေါ်တာနဲ့ အဲဒီကို ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အပြင်မှာ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ lady boy ချောချောလေးတွေကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ချောတာကတော့မိန်းကလေးတွေတောင် အရှုံးပေးရလောက်ပါပေတယ်.။ အသားအရေ လေးကလည်း ကိုင်ရက်စရာမရှိအောင် ချောမွတ်နေတာပါဘဲ။ ရင်ညွန့်ကလေး တွေများ ယောကျာ်းလေးတွေကြည့်ရင် အသည်းထိစရာ။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်တောင်သူတို့ နားဘဲကပ်နေလို့ မနည်း ဆွဲထားရတယ်။ သူတို့သလုံးသားလေးတွေများ ကိုယ်တို့မိန်းမတွေထက်တောင်လှသေးတယ်။ သူတုိ့က၀င်ငွေတော့ အဖြောင့်သားလား။ပွဲမစမီ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတယ်။ အဲလိုဓါတ်ပုံ ရိုက်ရင် ပိုက်ဆံ ဘက် 100 ပေးရတယ်။ တစ်ယောက်ကိုနော်။ သူတို့က ကိုယ်ရကိုယ်ယူဘဲ။ အုပ်စုလိုက် အရိုက်ခံလို့ တစ်ယောက်တည်းကို ပိုက်ဆံပေးလုိက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေက တောင်းတယ်။ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ သူကဘဲကျန်တဲ့သူကို ခွဲမပေးဘူး။
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြုပြီး ပွဲချိန်နီးတော့ ရုံထဲဝင်လာကြတယ်။ ထုံးစံအတ်ိုင်း ကင်မရာမရိုက်ရ ဘာမရိုက်ရ ပေါ့။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပွဲက ။ ဆက်တင်အခမ်းအနားအပြင်အဆင်ကလည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ ရန်ကုန် မှာ မိုးကြိုငှက်ငယ်လေးများကလည်း ထိုင်းက ပွဲတွေလိုလိုက် လုပ်တာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဆက်တင်အခမ်းအနား၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ မိတ်ကပ် ပြင်မှု စတဲ့ဟာတွေ က ထိုင်းနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ ဒါက အဓိက ဆိုတော့ သူတို့က တကယ်လုပ်ကြတာပေါ့။ အိန္ဒိယ အက၊ ကိုးရီးယားအက ၊ တရုတ်အက၊ Nobody Group Song၊ ဟာသ မယ် အက ၊ အီဂျစ်ဘုရင်မတွေ ရဲ့ သရုပ်ဖော်အက၊ ပန်းဝတ်မှုန်အက တွေနဲ့ ပွဲကို ည ၉း၀၀ ကနေ ၁၁း၃၀ လောက်အထိ မရိုးနိုင်အောင် တင်ဆက်သွားပါတယ်။ကြည့်ရတာအရမ်းတန်ပါတယ်။ အဲနောက်တော့ သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ မြို့ထဲပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ က Bengalar လမ်းမှာ ချပေးပါတယ်။ ကိုယ်တုိ့လည်း မနေ့က Package Tour ၀ယ်တဲ့ဆိုင်မှာ ဘဲ PHI PHI ISLAND ကို speed boat နဲ့ သွားမယ့်ခရီးစဉ်ကို တစ်ယောက်ဘက် 1000 နဲ့ဝယ်ပြီး hotel ကို Taxi နဲ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
at Saturday, December 26, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
at Tuesday, September 22, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
ကြောက်စိတ် (ခ) PHOBIA
မနေ့ က ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်လက်တွဲဖော်နဲ့ ရန်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ကျတော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်ကိုချော့တဲ့ အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်လိုက်ပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘဲ PHOBIA2ဇာတ်လမ်းလေးက်ို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယိုးဒယား က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ကြောက်ဖို့ ကောင်းသလို သူ ပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ် ။ ကိုယ့်စိတ်က ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုခြောက်လှန့်တယ် ဆိုတာကို အပိုင်းတိုလေးတွေနဲ့ ပြသ သွားပါတယ်.။ ကိုယ်မဟုတ်တာ တစ်ခုလုပ်ထားပြီ ဆို ရင် အဲဒီ လိပ်ပြာ ကကိုယ့်ကို ခြောက်လှန့်နေတာပါဘဲ။ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကြောက်တတ်တဲ့သူများ တော့ သွားမကြည့်ပါနဲ့။ စိတ်ခြောက်ခြား စရာ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်က PHOBIA စကားလုံးနဲ့ ရင်းနီးနေတာ ကြာပါပြီ။ စင်ကာပူ က ပိုလီ ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ ပြဇာတ်တစ်ခု မှာ လည်း အဲဒီ PHOBIA အကြောင်း တင်ဆက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူကကျတော့ တစ်မျိုးပါ။ သူ့ဇာတ်လမ်းလေးက ကျတော့ ဒီလို။
ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်က သူတပည့်ကျောင်းသားတွေကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြနေပါတယ်။
တစ်ခါက ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးတည်း သီတင်းသုံးနေတဲ့ကျောင်းမှာ မောင်ငယ် (နာမည်သေချာမမှတ်မိတော့လို့ တခြားနာမည် ထည့်လိုက်ပါတယ်) ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်ကျတော့ ဘုန်းကြီးအတွက် လာပို့ထားတဲ့ ဆွမ်းကို မောင်ငယ်က ခိုးစားမိပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကသူဆွမ်းစားချိန်ရောက် တော့ ဆွမ်းတွေ လျော့နေလို့မောင်ငယ် ကို ဒေါသတကြီးနဲ့ ရိုက်နှက်ပါတော့တယ်။ အဲဒါ ဘုန်းတော်ကြီး လွန်သလား ၊ မောင်ငယ်လွန်သလား?
အဲဒီအကြောင်းကို ကျောင်းဆရာက ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ကျောင်းသားတွေကို စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်ေ၇းလာဖို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ နောက်ရက်ကျတော့ ကျောင်းသာတွေက ကျောင်းဆရာ ကို ပြပါတယ်။ အဲဒီ မှာ မောင်သီဟ ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေက ဘုန်းတော်ကြီး က မောင်ငယ် မခိုးတတ်အောင်ဆုံးမ တာလို့ ရေးကြပါတယ်။ မောင်သီဟကတော့ တရား ပြည့်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီး ဒီလောက်ဒေါသ မကြီးသင့်ကြောင်း၊ ဆွမ်းခိုးစားတာလေးနဲ့ မရိုက်သင့်ကြောင်း၊ပါးစပ်နဲ့ ဘဲပြောဆိုဆုံးမသင့်ကြောင်း ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီထင်မြင်ချက်ကို ကျောင်းဆရာလည်း ဖတ်ရရော မောင်သီဟကို ရိုက်ပါတော့တယ်။ ကျန်တဲကျောင်းသာတွေကို ဆရာ ကိုယ့်ကို ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ် အမှန်ကို မပြောရဲတာကို သရုပ်ပေါ်အောင် ပြသသွားပါတယ်။ မောင်သီဟ တစ်ယောက်သာ ကိုယ့် ထင်မြင်ချက်ကို ကိုယ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ ရေးသားရဲတဲ့သူပါ။
ခုလက်ရှိ ကိုယ်တို့နိုင်ငံမှာ လည်းဒီလိုပါဘဲ။ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် မိဘတွေရောမောင်နှမတွေ ရောက်ို ပါတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့ သူတို့အုပ်စိုးတိုင်းခံနေရတာပါ။ တကယ်လည်းအဲဒီလိုဖြစ်အောင်သူတို့ လုပ်နေကြတာပါ။ ဘလော့တောင် မရေးရဲလောက်အောင် ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အဲဒီ ကြောက်စိတ် ဆိုတာကြီးကို သူတို့ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ ပြည်သူလူထု ရဲ့စ်ိတ်မှာ အဲဒီ ကြောက်စိတ် မရှိတော့ဘူးဆိုရင် သူတို့တွေလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လည်း အဲဒီ ကြောက်စိတ် တွေ မရှိတော့အောင်ကြိုးစားရမယ့်အထဲမှာ ပါပါတယ်။
အားလုံး ဒီ PHOBIA ဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံတဲ့စိတ်က ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ ရှင်။
ပုံကို ဒီက ယူထားပါတယ်ရှင်။
at Monday, September 21, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
သိသမျှရေးရသော် နတ်ကတော်လုပ်နည်း နိသရည်းကား ..
၃) နတ်ဆိုင်းဆရာကိုလဲ အတီးကောင်းအောင်ကပ်ရမည် ၊ နတ်သမိုင်းစာကိုလဲ
အရွီးကောင်းအောင် ဖတ်ရမည် ။
၅) အပြောကျင့်က တစ်မနက်တည်းနှင့် မောနိုင်သည် ၊ အဟော သင့်က
၁၁) ဇာတ်ခုံပေါ်လဲ ကြောင်ရဲရမည် ၊ နတ်ပုံတော်လဲ ပေါင်ရဲရမည် ။
၁၂) ယတြာကိုလဲ ဆောင်ရမည် ၊ ပ၀ါကိုလဲ ပေါင်ရမည် ။
၁၃) ဒေါင်းဖဲကိုလဲ ကပ်ထားရမည် ၊ ဗလောင်းဗလဲကိုလဲ တတ်ထားရမည် ။
၁၄) ဂါတ်စာရေးလာမှ အာမခံရသည် ၊ နတ်မေးလာမှ ဆာသမျှနှံရသည် ။
၁၅) အရပ်နူး ကိုလဲ အတည့်တွေးရမည် ၊ နတ်ရူးကိုလဲ တပည့်မွေးရမည် ။
ဒါ့ကလောက် တတ်လျှင်ဖြင့် ဘ၀တစ်သက်တာ ငတ်စရာမရှိ ကြီးပွားဖို့သာရှိကြောင်း
ကျွန်ုပ်က ရဲရဲကြီး အာမခံပါသည်။
နတ်ကတော်လောကတွင်ကျင်လည်ကျက်စား သာမန်နတ်ကတော်များထက် တစ်ကွက်သာစေရန်
ဆောင်ရန်နည်းလမ်းများကိုလဲ အရူးချေးပန်း ပရမ်းပတာ ရှင်းပြပါဦးမည် ။
၁) ကြက်သားကိုလဲ အုပ်ရမည် ၊ ၀က်သားကိုလဲတုတ်ရမည် ။
ကြက်သားကို အုပ်မှ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်နိုင်သည် ၊ ၀က်သားကို တုတ်မှ ၀က်ပုပ်ကလေးဖြစ်နိုင်သည် ။
၂) ပရမ်းပတာလဲ ပြောရမည် ၊ လမ်းမှာလဲဟောရမည် ။
ပရမ်းပတာ ပြောမှ အဟုတ်ထင်သည် ၊ လမ်းမှာ ဟောမှအလုပ်တွင်သည်။
၃) ငါးခြောက်ကိုလဲ ကြော်ရမည် ၊ အခြောက်လိုလဲ ပျော်ရမည် ။
ငါးခြောက်ကိုကြော်မှညှော်မိသည် ၊ အခြောက်လိုပျော်မှ အဖေါ်ရှိသည် ။
၄) လင်ကိုလဲ ညာတတ်ရမည် ၊ အချဉ်ကိုလဲ ရှာတတ်ရမည် ။
လင်ကိုညာတတ်မှ မိုက်လို့ကောင်းသည် ၊ အချဉ်ကို ရှာတတ်မှ ရိုက်လို့ကောင်းသည်။
၅) ဒိုင်ခံစရာ ကျပ်ငွေ အပိုလဲရှိရမည် ၊ နိုင်ငံတကာ နတ်တွေကိုလဲ သိရမည် ။
ဒိုင်ခံစရာ ကျပ်ငွေ အပိုရှိမှ အလျော်အစားမြိုင်သည် ၊ နိုင်ငံတကာ နတ်တွေကိုသိမှ ကျော်ကြားနိုင်သည် ။
၆) တောအရက်လဲ သောက်ရမည် ၊ ဟောချက်လဲပေါက်ရမည် ။
တောအရက်သောက်မှ ခံတွင်းသန့်ပြီး လျှောက်လည်ဟောနိုင်သည် ၊ ဟောချက်ပေါက်မှ သတင်းပျံ့ပြီးဖောက်သည်ပေါနိုင်သည် ။
၇) အပျော်ကိုလဲ ကြိုက်ရမည် ၊ စားတော်ကိုလဲ တိုက်ရမည် ။
အပျော်ကြိုက်မှ အတွဲအသစ်ထားနိုင်သည် ၊ စားတော် တိုက်မှ အသည်းအမြစ်စားနိုင်သည် ။
၈) မြွေတောကိုလဲ ဖြတ်ရမည် ၊ ကြွေဟောကိုလဲ တတ်ရမည် ။
မြွေတောကိုဖြတ်မှ မြွေပြီးနိုင်သည် ၊ ကြွေဟောကိုတတ်မှ လေကြီးနိုင်သည် ။
၉)ဘူတာကတိုလဲ တစ်ရက်ကြိုပြေးရမည် ၊ လူတကာကိုလဲ မျက်နှာချိုသွေးရမည် ။
တစ်ရက်ကြိုပြေးမှာ သွားစရာ တီးကတ်ရသည် ၊ မျက်နှာချိုသွေးမှ စားစရာဖရီးနှက်ရသည် ။
၁၀) အကြွေးလဲ ဆန်ဆီ မကျန်ဖြဲရမည် ၊ အပြေးလဲ ချန်ပီယံ ဆွဲရမည် ။
ဆန်ဆီမကျန်ဖြဲမှ အမြတ်ထွက်ချေသည် ၊ ချန်ပီယံဆွဲမှ နတ်သက်ရှည်သည် ။
တတ်မှစားရသည်မဟုတ်ပါ ၊ နပ် လျှင်လဲ စားရပါသည်။
ငတ်မှလာဘ်မျှော်ဖြစ်သည် ၊ နပ်မှ နတ်ကတော်စစ်သည်။
လိပ်ပြာသိပ်မှ နတ်ကတော်ဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ၊ ရိတ်စရာ ရိတ်လျှင်လဲ နတ်ကတော်ဖြစ်ပါသည် ။
ရေစင်သောက်မှဖြစ်သည်လဲမဟုတ်ပါ ၊ ရေသန့်သောက်လဲ ဖြစ်ပါသည် ။
လူလိုမှ နတ်လိုပါသည် ၊ အူစိုမှ အငတ်ပိုပါသည်။
* သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ forward မေးလ်မှ ရပါသည်။
စာဖတ်သူ တွေကို ရီစေချင်လို့တင်ပါသည်။
တခြား ဘလော့ဂါ ရေးထားတာဆိုလျှင်လည်း အဲဒီ forward မေးလ် မှာ ဘာနာမည်မှမပါလို့ မဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
at Friday, September 18, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
ဒီစက်တင်ဘာလမှာ မွေးနေ့တွေ အတော်များတယ်ထင်ပါ့။ ဘယ်ဘလော့ခ်ကြည့်ကြည့်မွေးနေ့ တွေ တော်တော်များများ တွေ့ရ တတ်တယ်။ ခုလည်း လာပြန်ပြီ လို့မပြောလိုက်ပါနဲ့နော်။
ကိုယ့်လက်တွဲဖော် လေးရဲ့ မွေးနေ့မို့လို့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ အမြတ်တနိုး ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီစက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ကကိုယ်တို့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်လေးပါ။ ၆ ရက်နေ့ က Johor Bahru သွားတာကလွဲလို့ ဘာမှ မှတ်မှတ်ရရ မလုပ် ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ နေ့ သူ့မွေးနေ့မှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အမှတ်တရ လုပ်မယ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်တည်း သီးသန့် မွေးနေ့ပွဲလေး ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် မှာ တော်တော်လေးတူတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နာမည် မှာ နောက်ဆုံးတစ်လုံး တူပါတယ်။ပြီးတော့ သူကလည်း တနင်္ဂနွေသား ဖြစ်သလို ကိုယ်ကလည်း
တနင်္ဂနွေသမီး ပါ။သူ ကသူ့မိသားစု အငယ်ဆုံးဖြစ်သလို ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်မိသားစု မှာ အငယ်ဆုံးပါ.။ ပြီးတော့ သူရဲ့ လက်မောင်းအောက်နား ဂျိုင်းအောက်မှာ အမှတ်ကလေးပါသလို ကိုယ့်မှာလည်း သူ့လိုဘဲ အဲဒီနေရာ မှာ အမှတ်လေးပါပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက အဲဒီအမှတ်ပုံစံလေးပါ တူနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်လည်ပင်းမှာ အသားပို သေးသေးလေးနှစ်ခု ပါသလို သူဆီမှာ အဲဒီနေရာမှာ အဲလိုလေးပါတယ်။ ကဲ..မွေးနေ့ အကြောင်းလေးပြန်ဆက်ရအောင်နော်။
မနေ့ည ကတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မွေးနေ့ ရောက်တိုင်းမှာ သူ့မေမေကို လှမ်းဖုန်းဆက် ကန်တော့ပြီး ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ကို ရဟန်းသံဃာတွေကို ကပ်လှူခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ ကိတ်မုန့်ကို ၁၁း၄၅ မှာ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ ၁၂ နာရီတိတိမှာ ခွဲနိုင်အောင်လို့ပါ။ ကိုယ်အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ကဲ..မွေးနေ့ကိတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရအောင်နော်။
ဒါကတော့ Google ထဲက ကြိုးစားပန်းစား ရှာဖွေထားတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်လေးတွေပါ။
ဒါ ကသူ့အတွက် ပန်းစည်း ( Google ကရှာထားတာ ဟီး၂)
ဒါက အားလုံးသောက်ဖို့ ၀ိုင်...၀အောင် သောက်ကြနော်
နက်ဖြန်မှာ ကျရောက်မယ့် ၀က်ဝံလေး ရဲ့မွေးနေ့ ကိုလည်းတစ်ခါတည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။။
at Thursday, September 17, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
ခုမှ တရေးနိုးပြီး တဂ်ပို့စ်တွေရေးတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါရှင့်။ အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်။
ခုရေးမယ့်တဂ်ပို့စ်ကတော့ ၀က်ဝံလေးတဂ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့ခ်ငါးခုတဲ့။
သူ့ကိုတော့ ပြောထားတယ်။ ကြိုက်တာ ငါးခုမကဘူးလို့ ဟီး၂။
၁. ကိုယ် ဘလော့ခ်စေ၇းဖြစ်တာ မရွှေပြည်သူ ကိုအားကျလို့ပါ။ သူဘလော့ခ်လေးကို အားကျလွန်းလို့ ဒီဘလော့ခ်ကို စတင်တည်ဆောက်ဖြစ်တာပါ။ သူ့ရဲ့စာလေးတွေ ဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးလေးခံစားရတယ်။ စာဖတ်တဲ့သူကို စွဲဆောင်နိုင်တယ်။ စာဖတ်တဲ့သူ ကလည်း ငြိမ့်ငြိမ့်လေး စာထဲမှာ မျောသွားတယ်။ ကိုယ်တို့ဆို စာရေးရင်တုံးတိကြီး။ဘယ်လိုမှ ကိုဖတ်လို့မကောင်းတာ။ မရွှေပြည်သူ ဘလော့ခ်ကို အ၇မ်းကြိုက်တယ်။
၂. ဟဲဟဲ…ဒါကတော့ ကိုယ့်ကို တဂ်တဲ့ စက်တင်ဘာ ရဲ့ ကောင်းကင် (ခ) ၀က်ဝံလေးရဲ့စံမြန်းရာ (ခ) ငှက်ကလေးရဲ့စာမျက်နှာ ကိုပါဘဲ။ သူစာလေးတွေကျတော့ ဖတ်ရတဲ့သူရဲ့စိတ်ကို ရွှင်မြူးစေတယ်။ ပျော်ရွှ့င်စေတယ်။ ကိုယ်တော့ စိတ်ညစ်ရင် ငှက်ကလေးရဲ့ ဘလော့ခ်ကိုသွားလည် လိုက်တာဘဲ။ ကိုယ့်ဘလော့ခ် ရဲ့ပထမဆုံးပရိတ်သတ် တစ်ဦးပါဘဲ။အဲဒီအတွက်လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာဘွား ..၀က်ဝံလေးေ၇…၁၈ ရက်နေ့ စက်တင်ဘာမှာ ကျရောက်မယ့် ညီမလေးရဲ့ မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်း တစ်ရာတိုင် ပျော်ရွင်ဖွယ်မွေးနေ့များစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်။
၃. နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ခုဘ၀တစ်ပါး ပို့စ်ကိုရေးနေတဲ့ ကိုလူထွေး ရဲ့ဘလော့ခ်ပါ။ ကိုလူထွေး ကဟာသဥာဏ်ရွှင်တယ်လို့ဘဲ ပြောရမလား။ စာအရေးအသားကောင်းတယ်လို့ ဘဲပြောရမလား။ သူ့ပို့စ်တွေ ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်အတွက်တစ်ခုခု ရင်ထဲမှာကျန်ခဲ့သလို အမြဲခံစားရပါတယ်။ခု လည်းသူရဲ့ဘ၀တစ်ပါး ကိုစောင့်မျှော်ပြီး ဖတ်နေပါတယ်။
၄. နောက် ဖွားကိလို့ခေါ်တဲ့ ကိကိဖန်တီးတဲ့ Idiot Love ဆိုတဲ့ဘလော့ခ်ပါ။ သူ့ကျတော့ တစ်မျိုး ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင် သူ့ကိုဖတ်လို့ညွှန်းရမလောက်အောင် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေက်ိုပေးပါတယ်။ သူ့ဘလော့ခ်က်ိုလည်း ပို့စ်အသစ်တက်တာနဲ့ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၅. နောက် မနောဖြူတဲ့ ဂျိန်းဖောသူလေး မြုးသျှရီ ရဲ့ဘလော့ခ်ပါ။ ဟင်းမချက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အဖို့ သူ့ဘလော့ခ်ကတင်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကြည့်ပြီး သရေယိုခဲ့ရပေါင်းလည်းမနည်း တော့ပါဘူး။ ဟင်းချက်နည်းပါတဲ့ ဟင်းတွေဆို လိုက်ချက်ကြည့်တာ ဘယ်လိုမှကို မရတာ။ဟီး၂ တော်တယ်နော် အရမ်းဘဲ။
၆. မေလေး ရဲ့ ဘလော့ခ်ကလည်းကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘလော့ခ်မှာ တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ်အထောက်အကူပြုတဲ့ ဘလော့ခ်လေးတစ်ခုမို့ အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။
၇. နောက်တစ်ခုက ချစ်ခြင်းသင်္ကေတကို ဖော်ညွန်းတဲ့ အနမ်း ရဲ့ ဘလော့ခ်ပါ။သူ့ကိုကျတော့ ဘာလို့မှန်းမသိ ကြိုက်ကိုကြိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တွေအရမ်းရှုပ်လာရင် သူ့ဘလော့ခ်လေးထဲ ၀င်သွားရင် အဲဒီစိတ်ရှုပ်ထွေးတာတွေပျောက်သွားရော။။
၈. ကိုသီဟသစ်ရဲ့အားမာန်သစ် မှာကျတော့ နောက်ဆုံးက bonus ထည့်ပေးတာကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ။ စာတွေဖတ်ပြီးသွားရင် အဲဒါလေးဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ။
၉. နောက်တစ်ခု က ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်ရဲ့ စာတိုပေစများ တဲ့။ ပထမ သူတို့ကို စုံတွဲလို့ထင်ထားတာ ။ နောက်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိ၇တယ်။ သူတို့ရဲ့အပြိုင်အဆိုင် စာတွေကမိုက်တယ်။ ရေးသားပုံကလည်း ထိမိတယ်။
၁၀. မယ်ကိုး ရဲ့ အေ၇းအသားကိုလည်းကြိုက်တယ်။ သူများနဲ့ မတူဘဲ တစ်မူကွဲထွက်နေလို့။ဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။
ကိုမြစ်ကျိုးအင်း တို့ ။လင်းကြယ်ဖြူ တို့ ၊ချစ်ပါးလုံး တို့ ဘလော့ခ်ဆိုရင်းလည်း အမြဲေ၇ာက်ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဘလော့ခ်တွေဆိုလည်း အမြဲသွားဖြစ်တယ်။
at Sunday, September 13, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး
စက်တင်ဘာလရဲ့ပထမဆုံး ပို့စ်အဖြစ်မင်္ဂလာရှိစွာ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးနဲ့ စလိုက်ရအောင်။
ကိုယ်က မွေးနေ့ တွေကို အလေးထားတတ်သူပါ။ အဲဒီလိုဘဲ ကိုယ့်မွေးနေ့ဆိုရင်လည်း အလေးထားစေချင်တဲ့သူပါ။အရင်က ကိုယ့်မွေးနေ့ရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်မိဘ ရယ် ကိုယ့်ရဲ့ မောင်နှမတွေရယ် က ကိုယ့်ကို ဘယ်နေရာကဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုံးဆက်ပြီး ည ၁၂ နာရီ ကျော်တာနဲ့ Birthday wish လုပ်တတ်ကြ ပါတယ်။ ခုတော့ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်တစ်ယောက် တိုးလာပြီပေါ့။ ကိုယ်အရမ်းပျော်ပါတယ်။ အဲလို Birthday wish လုပ်တဲ့ အသံဟာ ဘယ်မွေးနေ့ လက်ဆောင်နဲ့မှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရလောက်အောင် ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးပါတယ်။ကဲ..ထားပါတော့။
ခု စက်တင်ဘာလဟာ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သူတော်တော်များများ မွေးနေ့ ဖြစ်တဲ့လပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ မွေးနေ့ကို ကိုယ်ဒီနေရာက ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ မမAir ပါ။ သူက ကိုယ်တို့ ဒီစင်ကာပူမှာ ကျောင်းစတက်တော့ ကိုယ်တို့နားမလည်သမျှ စာတွေ ကို ဒိုင်ခံ ရှင်းပြတဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ဆရာမလေးပေါ့။ သူက အရမ်းကို စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပါတယ်။ စာမေးပွဲ မနက်ဖြန်လို ဖြေရတော့မယ် ဆိုရင် ဒီနေ့အထိ ကိုယ်တို့ကို စာရှင်းပြတုန်းပါ။ သူကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ်စာမေးပွဲ အောင်လာတာပါ။ ဒီနေရာမျိုးမှာ ရပ်တည်နိုင်တာပါ။
Happy Birthday ပါ မမ Air ရေ…
နောက်နှစ်ယောက် ကတော့ စက်တင်ဘာ (၇) ရက်မှာ မွေးတဲ့ ကိုယ့်အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းနှစ်ယာက်ဖြစ်တဲ့ သူရိန် နဲ့ သီတာ ပါ။ သူတို့ ကအမွှာမောင်နှမပါ။ ကိုယ်တို့ ၆တန်းလောက်ကတည်းက တွဲလာကြတာ ခုထိဘဲဆိုပါတော့ ။သီတာကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်သွားပြီ။ သူရိန်က ကြိုးစားတုန်း ဟဲဟဲ။ Happy Birthday ပါ သူရိန် နဲ့ သီတာရေ…
နောက် တစ်ယောက် က ၉ ရက် ၉ လ မှာမွေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကိုကိုဖြစ်တဲ့ ကိုသားကြီး ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ သူကမောင်နှမ အားလုံးထဲမှာ ကိုယ့်ကို အချစ်ဆုံးတဲ့။ ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးလေ။ သူပြောတာပဲ။ ဟီးဟီး ။ကိုကြီး သားကြီးရေ.. ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။
နောက် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ မမကြီး ပါ။ ကိုယ့်ကို အမကြီး အမိရာပီသစွာ သွန်သင်ဆုံးမ ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ကျေးဇူးတွေဟာ ဆပ်လို့ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ်ငယ်ငယ်လေးထဲက သူ့လက်ပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်ကို ခုချိန်ထိ နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ပေးခဲ့ တဲ့ သူပါ။ ခုချိန်ထိ ကိုယ် ဘာလုပ်လုပ်သူ့ကို တိုင်ပင်ပြီးမှလုပ်နေဆဲပါ။ မကြီးရေ… Happy Birthday နော်။
နောက် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းလေး သူဇာပါ။ ခုတော့ သူလည်း ဘယ်တွေရောက်နေလည်းမသိဘူး။မတွေ့ဖြစ်တာ သူတို့ သုဝဏ ပြောင်းပြီးကတည်းက ဆိုပါတော့။ ကိုယ် ၁၀ တန်းလောက်ကတည်း ကမတွေ့တော့တာ။ Happy Birthday သူဇာ ရေ…
ဟဲဟဲ။။။ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရောက်တော့ ကိုယ့်ဖူးစာရှင်လေးကို သူ့မေမေက လူ့လောကထဲ ကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ လက်တွဲဖော် မွေးနေ့လေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ မွေးနေ့မှာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမယ်။ အဲဒီနေ့ကျရင်…
နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကတော့ စက်တင်ဘာ ၂၀ မှာ ကျရောက်မယ့် ကိုယ့်အစ်မ တစ်ယောက်လိုခင်မင်ရတဲ့ မထွေးပါ။ သူကကိုယ်တို့ အပေါ်မှာ အကြီးပီသခဲ့ပါတယ်။ မထွေး ရေ..ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေနော်။
ကဲ။။။အားလုံးသော စက်တင်ဘာလမှာ မွေးတဲ့သူအပေါင်းကို ဒီနေရာကနေ Birthday Wish လုပ်ပါတယ်။
at Tuesday, September 01, 2009 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး